Wareegga horumarka ee Xfce 4.10 | Laga soo bilaabo Linux
Wareegga horumarka ee Xfce 4.10
Waxaa lagu dhawaaqay madasha Xfce wareegga horumarka ee sii deynta soo socota ee xasiloonida jawigan desktop-ka, kadib markii wareegga qorshayntu xirmay Axaddii la soo dhaafay.
Sida ku xusan taariikhaha la soo jeediyay, waan haysan doonnaa Xfce 4.10 loogu talagalay Janaayo 15, 2012. Noocaan (iyo mustaqbalka) isbeddelo xiiso leh ayaa la soo jeediyey:
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'thunar' si loo bixiyo xfdesktop shaqeynaya.
Isku dar shaqeynta xfrun4 iyo xfce4 appfinder-hal codsi.
Hagaaji dhammaan wada hadallada shaashadaha yaryar.
Hagaajinta marin-u-helka mashiinka 'Xfce desktop' iyo is-dhexgalka Orca.
Sida iska cad, isbadaladaan iyo dhamaan soo jeedimaha kale waxay kaliya wax ku ool noqon doonaan iyadoo kuxiran waqtiga ay horumariyayaashu ku qaadan karaan fulintooda.
Nasiib darrose Gtk3 Maaha qorshayaasha sii deyntaan, wax aniga dhinaceyga u muuqda mid gebi ahaanba khaldan, laakiin sida muuqata, horumariyayaashu waxay damacsan yihiin inay xidhaan wareeggan iyagoo si hufan u hagaajinaya faahfaahinta weli sugaysa, ka hor intaanay bilaabin inay u haajiraan wax walba Gtk3.
Wareegga dhameystiran waa kan:
2011-02-13 - 2011-11-05: Wajiga Horumarinta
2011-11-06 - 2012-01-15: Siidaynta:
2011-11-06: Xfce 4.10pre1 sii deynta / Qaboojinta aaladda
2011-12-04: Xfce 4.10pre2 sii deynta / String xayiray
2012-01-08: Xfce 4.10pre3 sii deynta / Xayiraadda Code
2012-01-15: Xfce 4.10 Soosaarkii ugu dambeeyay
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Wareegga horumarka ee Xfce 4.10
Waxaan isticmaalaa qaar ka mid ah qaybaha XFCE ee kala ah Thunar iyo XFBurn (Waxaan u isticmaali jiray Brasero, laakiin kuma isticmaali jirin GNOME qaansoleyda waxay i siisay cayayaanka qaarkood)
Aan aragno sida ku saabsan Thunarka xiga ee aan jeclahay ^^
Mahadsanid, Elav. Waan ku faraxsanahay warkan maxaa yeelay hada waxaan ahay isticmaale Xfce. Waxaan rajeyneynaa in mashruucu si aad ah usii socdo. Haye, oo hadaad awoodo, maxaad wax ugu soo dhejin la'dahay meelaha loo maro Thunar? Waan u xiisay tabaha aan ku lahaa Nautilus.
Dhamaadka waxaan ku rakibay Xubuntu 11.10 PC-ga hore si aan u bedelo Ubuntu 11.04 wax walbana way fiicnaayeen. Laakiin ka dib markii la rakibo (oo la tirtiro mar dambe) CCSM iyo Fusion Icon si loo tijaabiyo waxoogaa saamayn ah, waxay soo baxday in waraaqaha barnaamijyada barnaamijka ee aan ku haysto Aaladda 'AWN Dock' ay ku soo baxayaan madow, sidaa darteed asalka madow waa wax aan macquul ahayn in la akhriyo magaca arjiga. Fikrado kasta sida loo beddelo midabka xarfaha?
Hadda laptop-ka waxaan ku hayaa Ubuntu 11.10 oo leh Gnome Shell iyo munaaradda Xubuntu 11.10, waxaan jecelahay inaan ku kala beddelo mid ama midka kale sida aan doono. Dhanka kale waxaan sugayaa noocyada 12.04, waxaan horeyba uga daalay isbedel badan 6dii biloodba mar ...
Mahadsanid iyo salaan !!
Ku jawaab acutbal
Anigu ma ihi Dock jecel, laakiin waxaan u maleynayaa in xarfaha madow ee AWN la qaabeyn karo. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo Qaahira-Dock.
Waa arrin dhadhan, laakiin Xfce uma baahna saameyn badan, gaar ahaan tan lafteeda waxay keeneysaa Windows Composer leh qaar aad u xiiso badan, dabcan, ma jiraan wax horumarsan sida Compiz.
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay jawaabtaada !!
Taasi way socotaa, haddii dhibaatadu tahay taas oo ay sabab u tahay rakibaadda CCSM iyo Fusion Icon waraaqaha ayaa madoobaaday markii ay caddaayeen ka hor, markaa dhibaatada, hadda lama aqrin karo. Waxaan u maleynayaa inay qasab tahay inay ahaato wax daaqadda daaqadda ama wax. Waxaan raadinayaa wax "dib-u-dejin" desktop-ka ah midnimo markii aan qorayo "midnimo dib-u-dejin" terminal (ama wax la mid ah ...)
Ma waxaad u jeeddaa dib u dejinta dejinta Xfce?
Haa !! Isla sidaas !!!
Waan ka xumahay hadaanan sifiican usheegin laakin waxaan aduunka kaliya kusugnaa tan iyo dhamaadka bisha May walina waxaan ahay qof cusub ... Sidookale, heer kumbuyuutarkeygu waa cadaalad, cadaalad ...
Hagaag, hadda kuuma sheegi karo waxa ay yihiin galka saxda ah maxaa yeelay ma haysto Xfce oo rakibay, laakiin inbadan ama kayar waxaad samayn karto waa kuwan soo socda:
- Furan Thunar
- Riix Ctrl + H si aad u muujiso feylasha iyo faylalka qarsoon.
- Keydso dhammaan fayllada aan hoos ku magacaabay.
- Ka dhex raadi faylalka .config, iyo .cache wax kasta oo la xidhiidha xfce, xfwm, thunar oo tirtir.
- Hadaad rabto sidoo kale tirtir galka .gconf iyo .gconfd hadii uu jiro.
- Xir fadhiga oo dib u gal.
(Waxaan kuugu jawaabayaa halkan sababtoo ah astaamaha jawaabta kuma muuqato faallooyinka kale)
OK haddii aan saxo waa inaan sameeyaa nuqul ka mid ah feylasha qarsoon (haddiiba ay dhacdo) ka dibna gudaha .config iyo fayl. cachev wuu tirtiray wax walba oo laxiriira xfce, xfwm, thunar. Intaas waxaa sii dheer sidoo kale waan tirtiri karaa galka guud .gconf iyo .gconfd (hadii ay jiraan). Kadib dib u bilow.
Okay, caawa waan isku dayi doonaa oo waan kuu sheegi doonaa.
Aad ayaad u mahadsantahay !!!!!
Hagaag haa, way i shaqeysay aniga !! Mahadsanid milyan !!!
By the way, Thunar kuma dawan kartid faylasha tabs, had iyo jeer waa inaad furtaa daaqado cusub sida Finder-ka Mac OSX, sax?
Salaan iyo mahadsanid !!
Waan ku faraxsanahay inaad shaqeysay. Iyo maya, nasiib daro Thunar ma laha tabs, taas oo ah wax laga xumaado oo dhab ah. Waxaan ka fekerayaa inaan arko haddii ay suurtagal tahay in lagu rakibo Marlin (Furaha faylka aasaasiga ah ee OS) 'Debian', in kasta oo aanan garanayn inay talooyin yeelan doonaan sidoo kale .. Waa inaad hubisaa 😀
Waxaan ku rakibay Marlin laptop-ka Ubuntu 11.10 iyo munaaradda Xubuntu 11.10, labadaba waxaa ku shaqeynaya tabs. Laakiin ka mid ahaanshaha horumarka weli waa wax yar oo cagaar ah, looma turjumay Isbaanish, u-habeyn ayaa ka maqan baarka sare sida midka Nautilus-Elementary ama astaamaha ku yaal baarka dhinaceeda beddelin cabbirka. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo isticmaali karaa dhibaato la'aan, dhab ahaantii waxaan ku darayaa iyada oo u dhiganta labadayda kombuyuutar. Waxaan u maleynayaa inay wax badan ballanqaadayso ...
Haye, waxaan hadda adeegsadaa Linux Mint Debian oo leh Xfce. Waxaan doonayay inaan rakibo Qaahira dock, laakiin waxay i weydiisay inaan kiciyo saamaynta halabuurka. Dhibaatadu waxay tahay in tani ay cunayso ilo dheeri ah, laakiin iyagu waa saamaynta u gaarka ah Xfce, sidaa darteed ma noqon doonaan kuwo badan sida Compiz.
Ugu dambeyntiina, maahan inaan wax allabaryo u huro. Waxaan helay Adeskbar, oo noqon kara deked ama guddi, aad u fiican oo aad u fara badan, oo aan cunin saamaynta halabuurka. Dhibaatadu waxay tahay in horumariyayaashu ay ka baxeen mashruuca waqti dheer ka hor. Waxaan helay noocii ugu dambeeyay waxayna si fiican u shaqaysaa. Ah, waan ilaaway inaan dhaho waxaa loo sameeyay Fluxbox, sidaa darteed, waxaa loogu talagalay kombiyuutarada leh ilaha kooban.
Waxaan haystaa Xubuntu 11.10 oo lagu rakibey kombuyuutar duug ah (oo Ubuntu 11.04 ku beddelaya midnimo) iyo laptop cusub oo ah Ubuntu 11.10 oo leh Gnome Shell, waxaanan jecelahay kombuyuutarrada beddela sida aan u malaynayo, aad baan ugu qanacsanahay labadoodaba!
Ka dib markii la rakibo (oo mar dambe la tirtiro) CCSM iyo Fusion Icon ee Xubuntu si loo tijaabiyo waxoogaa saamayn isku dhafan ah, waxay soo baxday in waraaqaha barnaamijyada barnaamijyada ee aan ugu jiro Aaladda 'AWN Dock' ay ka soo baxayaan madow, marka taariikh mugdi ah aniga macquul maahan si aad u aqriso magaca dalabka. Fikrado kasta sida loo beddelo midabka xarfaha?
Hagaag, waxaan nahay Janaayo 25, 2012, walina waxba ma ahan
Soo Dhaweyn Sabti:
Xfce 4.10 wuxuu leeyahay taariikh cusub oo la sii deyn doono bisha Maarso
Qaybta saddexaad ee: Baro barnaamijka Python
Xirmooyinka 3.1 horeyba way noo dhex joogtay!